2020: yakaderera kugadzirwa kwembatatisi mumakore gumi - Nhau dzeMbatatisi
2020: yakaderera kugadzirwa kwembatatisi mumakore gumi
Muna 2020, huwandu hwakaderera hwembatatisi hwakagadziriswa mumakore gumi apfuura nematoni emamirioni 3,391. Zviri pachena kuti dambudziko rekona rakarova zvakanyanya.
Matani mazana maviri nemakumi matatu nematatu ematatata akagadziriswa muna Zvita 293,000, zvichienzaniswa nematani mazana matatu nemakumi matatu nemakumi mairi nemashanu muna Zvita 2020. Uku kuderera kwe317,500 muzana Zvigadzirwa zvaDecember zvaive zvishoma pamusoro pe 2019 matani munaNovember, asi zvakare pasi pemakumi matatu nemakumi matatu ematani matani munaGumiguru 7.7.
Pamusoro pegore rose ra2020, matani matatu nemakumi matatu nemakumi matatu nemakumi matatu ematatata akagadziriswa, zvichienzaniswa nematani mazana matatu nemakumi matatu nemakumi matatu nemazana mashanu ezviuru zvegore rose ra3,391,400. Kuderera kwe3,863,500 muzana. Izvi zvinoonekwa kubva muchirevo chemwedzi nemwedzi cheDutch Potato Organisation (NAO).
Yakaderera mumakore gumi
Dambudziko rekona rakamisa pachena kukura kunogara kuripo kwekugadziriswa kwembatatisi. Gore ra2020 ndiro gore rine huwandu hwakaderera kwazvo hwembatatisi dzakagadziriswa mumakore gumi apfuura. Muna 2020, matani 3,391,400 akagadziriswa, muna 2019 3,863,500 matani, muna 2018 matani 4,012,300, 2017 matani 4,018,800 uye muna 2016 matani 3,88,730. Gore ra2020 richiri pazasi peyakaenzana yegore ra2010, apo matani mazana matatu nemakumi matatu nemakumi mashanu nemakumi mashanu neshanu emapatata akagadziriswa.
/ hupfumi / musika /
4 gore rapfuura - 2016: ramangwana rakamira sei kune iyo mbatatisi?
Maodzanyemba eEurope nyanzvi yemazamu Olaf van Campen: “… Uye yakawedzera kuti kusvikira 2020, pachave nekukura kwepasirese kudiwa kwemapatata… ”
Tags: musika wembatatisimbatatisi yakagadziriswakugadzira
Brexit yekumutsiridza yeIreland mbeu yemazamu
Idahoan® Inosheedzera Memphis iyo Mashed Mbatatisi Guta reAmerica uye Inonunura Anopfuura Makumi mazana matatu emabhegi Mahara